Semalt: Ahoana no hanakanana tranonkala iray ao amin'ny Google Chrome amin'ny 14 Easy Steps
Na mandany ora maro ao amin'ny tranonkalan'ny sasany ny zanakao na mahita tranokala misy marika pop-on sy faneva, azonao atao ny manakana ireo tranonkala tsy mila sy manafintohina amin'ny Google Chrome anao. Raha fantatrao fa Chrome dia tranokala maimaim-poana novolavola sy nampidirin'i Google, dia natomboka tamin'ny 2008 ho an'ireo mpampiasa Microsoft Windows. Taty aoriana, Google Chrome dia nakarina tamin'ny macOS, Android sy Linux fitaovana. Ankehitriny, io no sehatra voalohany indrindra amin'ny fampiharana ny rindrambaiko web.
Na dia mikaroka ny aterineto aza ianao, dia mety hivezivezy amin'ny tranonkala tsisy saina sy tsy tadiavina, izay azonao atao mora foana ny manakana amin'ny fanitarana fahatelo. Na izany aza, raha tsy te hampiasa ireo fanitarana ireo ianao, dia araho ireo dingana 14 notakin'i Michael Brown, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt Digital Services.
Dingana # 1: Karakarao ny tranonkalanao:
Saika ny tranonkala browsers rehetra dia manana ny tranokala Blocker extension. Tokony hitady izany ao amin'ny Google Chrome ianao mba hisorohana ireo tranonkala mampiahiahy anao.
Dingana # 2: Raiso ny extension:
Raha tsy manana fanitarana ianao mba hanakanana ireo tranonkala tsy fantatra, azonao atao ny manindry ny safidy malalaka ao amin'ny Google Chrome, ary ampidiro ny extension extension. Raha vantany vao novakiana, avelao ity extension ity hahatratra ny fitaovan'ny ordinateranao.
Dingana # 3: Mandehana mankany amin'io tranonkala io:
Ny dingana manaraka dia ny mivezivezy mankany amin'ny tranokala na blôgy tianao hotakiana ao amin'ny Google Chrome anao.
Dingana # 4: Ny tranonkala fanakanana tranonkala:
Amin'ny dingana fahefatra dia tokony kitiho ny sary miloko manga antsoina hoe Website Blocker. Eo am-pelatananao hatrany ny tranonkalanao.
Dingana # 5: Omeo ny fotoana:
Eto ianao dia mila miditra ireo ora, andro, herinandro na volana izay mety hanakanana ireo blaogy na tranokala..Tokony hiditra ao amin'ny Blok io safidy io ary tsy hanadino ny fotoana.
Dingana # 6: Fametrahana ireo tranokala voasakana:
Ny dingana manaraka dia ny fitadiavana ny tranokala Block Block ao amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana .
Dingana # 7: Download ny extension extension:
Tsindrio amin'ny safidy maimaim-poana mba haka ny extension extension amin'ny Google Chrome. Aza adino ny manindry ny boaty Fahazoan-dàlana, mamela ny fanitarana hanao asa isan-karazany.
Dingana # 8: Ny fanitarana fanitarana:
Ankehitriny dia tokony tsindrio amin'ny safidy Fandrindrana Extension mba hahazoana ny fanitarana entin'ny entana manontolo.
Dingana # 9: Soraty ny URL:
Mandehana any amin'ny tranokala Block Block ary ampidiro ao amin'ny URL tianao hotakiana. Aza adino ny manindry ny bokotra Add Page ary manakana ny tranokala maro araka izay tianao.
Dingana # 10: Azavao ny fanamarinana:
Mankanesa any amin'ny faritry ny fahamendrehana mamela heloka ary jereo ny marika izay miseho eo anoloana. Avy eo dia tsy maintsy ampidirinao ny tenimiafina hanakanana sy hamaha ny tranonkala. Tsindrio eo amin'ny safidy Set Password raha nofidina ianao ary ampidiro ny tenimiafina tianao.
Dingana # 11: StayFocusd:
Amin'ity dingana ity, tokony hitady ny fivoarana StayFocusd ianao amin'ny valin'ny fikarohana Google.
Dingana # 12: Raiso ity extension:
Tsindrio ny safidy maimaim-poana mba haka ny extension extension amin'ny Google Chrome. Aza adino ny mamela ny fanovana sasany amin'ny angon-drakitrao.
Dingana # 13: Fitetezana ny tranokala:
Avy eo, tokony hivezivezy mankany amin'ny tranonkala tianao hotakiana ianao amin'ny fidirana ao amin'ny sehatry ny sehatra ao amin'ny browser.
Dingana # 14: Safidy Safidy:
Tokony hotsikao ny faritra Advanced Option izay natao hanomezana fotoana ny tranokala iray tianao hotakiana. Aza hadino ny mamonjy ireo fanovana alohan'ny hanakatonana ny varavarankely Source .